Kuziva kuti uri munhu akaita sei uye kuti chii chinoita kuti uve munhu akadaro kuchakubatsira kuti ukunde miedzo.
Chimbofungidzira izvi: Karen achangobva kusvika papati uye anonzwa inzwi remumwe munhu waanoziva richimudana.
“Ko sei wakangomira pasina zvauri kuita?”
Karen anobva acheuka, obva aona kuti ishamwari yake Jessica uye akabata mabhodhoro maviri edoro achangobva kuvhurwa. Jessica anotambidza Karen rimwe racho oti, “Watokura shaa, ndonguva yekuti timbofarawo.”
Karen anombofunga kuramba, asi zvinomuomera nekuti Jessica ishamwari yake. Uye Karen haadi kunyadzisa mumwe wake. Uyezve Jessica haasi munhu wemisikanzwa. Saka kana iye achinwa, kureva kuti harina kumboshata. Karen anoti nechemumwoyo, ‘Kungotonhodzawo pahuro. Handingazvifananidzi nekushandisa madrugs.’
Dai uriwe Karen, waizoita sei?
Kuti uzive zvokuita panyaya iyi, unofanira kutanga waziva kuti uri munhu akaita sei uye kuti chii chinoita kuti udaro. Kana waziva izvozvo, unenge wava nesimba rekugona kusarudza zvaunoda muupenyu panzvimbo pekusarudzirwa nevamwe.—1 VaKorinde 9:26, 27.
Ungaita sei kuti uve nesimba iroro? Kupindura mibvunzo 4 inotevera kuchakubatsira.
Kuziva zvinhu zvaunogona uye unhu hwakanaka hwaunahwo ­kuchaita kuti uve nechivimbo pane zvaunoita.
MUENZANISO WEMUBHAIBHERI: Muapostora Pauro akanyora kuti: “Kunyange zvazvo ndingasava nyanzvi pakutaura, chokwadi handina kudaro pazivo.” (2 VaKorinde 11:6) Pauro ainyatsonzwisisa Magwaro uye izvi zvakamubatsira kuramba akasimba pakutenda vamwe vanhu pavaimupikisa. Haana kudzokera kumashure kunyange zvazvo vanhu vaitaura zvakaipa nezvake.—2 VaKorinde 10:10; 11:5.
ONGORORA ZVAURI: Nyora chipo chaunacho kana kuti chimwe chinhu chaunogona.
Iye zvino tsanangura chinhu chimwe chete chakanaka chaunonyatsogona. (Somuenzaniso, unobatsira vamwe here?, une rupo here?, uri munhu anovimbwa naye here?, unobata nguva here?)
2 NDEZVIPI ZVINONDIOMERA?
Kana ukaramba uchifunga zvinhu zvaunotadza, zvichakuomera kuti uone zvimwewo zvakanaka zvaunogona.
MUENZANISO WEMUBHAIBHERI: Pauro aiziva zvinhu zvaimuomera kuita. Akanyora kuti: “Ndinofarira mutemo waMwari maererano nomunhu wandiri nechomukati, asi ndinoona munhengo dzangu mumwe mutemo uchirwisana nomutemo wepfungwa dzangu uye uchinditungamirira ndiri nhapwa kuenda kumutemo wechivi.”—VaRoma 7:22, 23.
ONGORORA ZVAURI: Unoda kuzvidzora pazvinhu zvipi?
3 ZVINANGWA ZVANGU NDEZVIPI?
Zvine musoro here kuti wokwira taxi woudza mutyairi kuti ngaangotenderera kusvikira peturu yapera? Hazvina musoro uye kutambisa mari
Chii chatinodzidza? Kana ukava nezvinangwa unenge uine gwara muupenyu nekuti unenge uchiziva kwauri kuenda uye kuti ungasvika sei ikoko.
MUENZANISO WEMUBHAIBHERI: Pauro akati: “Handimhanyi semunhu asina chinangwa.” (1 VaKorinde 9:26, Bhaibheri Dzvene MuChishona Chanhasi) Pane kuti angoita chero chainge chamuka, aiva nezvinangwa muupenyu uye aiedza kuzvizadzisa.—VaFiripi 3:12-14.
ONGORORA ZVAURI: Nyora zvinhu zvitatu zvaunoda kuita mugore rimwe chete.
4 NDEZVIPI ZVANDINOTENDA?
Kana uchinyatsoziva kuti uri munhu akaita sei, unenge wakafanana nemuti wakadzika midzi, zvekuti kana mhepo ine simba ikauya unoramba wakamira
Kana usingazivi kuti unoda zvipi, uchangoita zvese zvese. Sekuchinja kunoita rwaivhi, unenge wava kutevedzera vezera rako, uye izvi zvinoratidza kuti haunyatsoziva zvaunoda.
Asi kana uine zvaunotenda, uchaita zvinoenderana nezvaunoziva kuti zvakanaka pasinei nekuti vamwe vari kuitei.
MUENZANISO WEMUBHAIBHERI: Dhanieri paakanga achiri mudiki, “akatsunga mumwoyo make” kuti aizoteerera mitemo yaMwari, kunyange zvazvo akanga achigara kure nevanhu vekumba kwavo. (Dhanieri 1:8) Dhanieri haana kuda kutevedzera vamwe vanhu. Akaita zvinhu zvaaiziva kuti ndizvo zvakanaka.
ONGORORA ZVAURI: Ndezvipi zvaunotenda? Somuenzaniso: Unotenda here kuti Mwari ariko? Kana uchitenda, chii chinoita kuti unyatsova nechokwadi chekuti ariko?
Unobvuma here kuti zvatinoudzwa naMwari kuti tiite zvinotibatsira? Kana uchizvibvuma, chii chinoita kuti udaro?
Uchada here kufanana neshizha rinongopeperetswa nekamhepo kana kuti uchada kufanana nemuti unoramba wakamira kunyange kukaita mhepo ine simba? Kuti ufanane nemuti uyu haufaniri kutevedzera kese kese kanoitwa nevamwe. Uye izvi zvichakubatsira kupindura mubvunzo wekuti, Ndiri munhu akaita sei?
Tarisa zvinhu zvitatu zvawanyora pamubvunzo wechi3. Pachimwe nechimwe chazvo, chinyora chaungaita mwedzi uno kuti uzadzise zvawakaronga.